အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များကိုသာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်သစ်များအဖြစ် ရွေးချယ်ထား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များအဖြစ် ခန့်အပ်မည့်သူများကို ရွေးချယ်ခဲ့ရာ အားလုံးမှာ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင်များ ဖြစ်ကြသည်
Chu Chu ပရောဂျက်ဆိုတာ ရန်ကုန်မြို့လမ်းမထက်က စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ယူဆနေတာတွေကို ပြောင်းလဲချင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဂျာရတ်ဒေါင်းနင်း ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ- မာရိုဗာလီ တိုနီလို့လည်း သိကြတဲ့ ကို Cin Lamh Thang ဟာ ဒလမြို့က အမှိုက်တွေကို.
တယ်လီကွန်းလိုင်စင်သစ်အတွက် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွင် မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် စစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ပါဝင်မည်
Viettel ကို ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၆ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် မိုဘိုင်းဖုန်း အော်ပရေတာအဖြစ် လိုင်စင်လျောက်ထားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်မှ တပ်မတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထမြောက် တယ်လီကွန်းလိုင်စင် လေ ျှာက်ထားရေးအတွက်.
ရန်ကုန်မြို့မှာ မော်တော်ကားစီးရေ များပြားလာမှုနှင့်အတူ သစ်ပင်တွေ နည်းပါးသွားတာကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုပမာဏ သိသိသာသာ မြင့်တက်နေပါတယ် ဟိန်းကိုစိုး ရေးသားသည်။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီး အားလုံး သိရှိခံစားလာကြရပါတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုကလည်း သိသိသာသာ ဆိုးရွားလာပါတယ်။ ရန်ကုန်လေထုညစ်ညမ်းမှုက သက်ရောက်မှုတွေကို ရန်ကုန်မြို့တစ်ခွင်မှာ သိသိသာသာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့.
အစိုးရသစ် စတင်ချိန်တွင် ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဝန်ကြီးသစ်များကို ညွှန်ကြား
ဝန်ကြီးနေအိမ်များအတွက် ပရိဘောဂများကို ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် ဝယ်ရန်အပြင် နိုင်ငံတော်ငွေ ခြိုးခြံချွေတာရန်လည်း မှာကြားခဲ့သည်
Feliz Solomon ရေးသားသည်။
စတော့ရှယ်ယာ ရောင်းဝယ်မှုတွေကို လေ့လာ လာကြတဲ့ ရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများ